घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज
घरमा लक्ष्मीको बास होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? घरमा राख्नुहोस् यी चिज
तपाई दिन भरी कयौँ काम गर्नुहुन्छ ताकि लक्ष्मी माता खुशि भएर तपाईको घरमा खुशी छाओस् । त्यहि हामी मध्य कोहि त यस्ता पनि छौँ जो जिवन भरि कडा परिश्रम गर्दा पनि रोजी-रोटीको जुगाड गर्न बाहेक अरु कमाउन सकिन्न।
१. घरमा राख्नुहोस् बासुरी
२. भगवान गणेशको नृत्य गरेको मुर्ति
भगवान गणेश हर रुपमा मंगलकारी हुन्, तर धन-लक्ष्मीको दुख दुर गर्नको लागि नृत्य गरेको गणेश मुर्ति घरमा राख्नाले निकै शुभ मानिन्छ। भगवान गणेशको यस्तो मुर्ति घरको मुख्य द्वारमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यदि मुर्ति छैन भने तस्बिर पनि राख्न सकिन्छ।
३. घरको मन्दिरमा राख्नुहोस् लक्ष्मी र कुबेरको मुर्ति या तस्बिर
वास्तुका अनुसार, शंखमा वास्तु दोष हटाउने अद्भुत शक्ति हुन्छ, जुन घरमा शंख राखिएको हुन्छ त्यहाँ जुन कुरा पनि राम्रो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार, जुनको पूजा स्थलमा देवी लक्ष्मीको साथ शंखको स्थापना पनि गरिएको छ र पुज गरिन्छ भने त्यहाँ स्वयम लक्ष्मी माताको वास हुन्छ । यस्तो घरमा कहिले पनि धनको परिशानी हुँदै।
५. एकाक्षी नरिवल
नरिवललाई श्रीफल भनिएको छ र यसलाई देवी लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ । श्रीफलहरु मध्य एकाक्षी नरिवल निकै नै शुभ हुन्छ । जुन घरमा एकाक्षी नरिवल राखिएको हुन्छ र नियमित पुजा गरिन्छ, त्यहा संकट कहिले पनि नआउने मान्यता छ, न त कहिले धन-धान्यको कमी हुन्छ।
आज साउनको अन्तिम सोमबार पाँच पात भएकाे बेलपत्र, भगवान शिवलाई चढाउँदा कस्तो फल मिल्छ?
आज शुक्रबार, शुक्रबारको दिनमा कुन देबि देउताको पुजा आजा गर्दा धन बर्षा हुन्छ जानी राखौं
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ २मुख नागलाई छोएर सेयर गरौं बिल्कुलै बेवास्ता नगरौं